သင်၏ကြီးမားတဲ့ပရိတ်သတ်ရဲ့? သင်အချိန်ကြာမြင့်စွာများအတွက်အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းဖို့ခွင့်ပြုသောထိုခံစားကြည့်ပါအကောင်းဆုံးလိင်မဟုတ်ဘဲပတ်ပတ်လည်သရုပ်ဆောင်သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်? ကောင်းစွာ–အကြောင်းမင်းအတွက်အချိန်တက်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်း၊ထိုအခါ! သီညမ်းဂိမ်းမူလကအဖြစ်ထွက်စတင်ခဲ့ဝါသနာသတ္တုတွင်း၏၊ငါမူကားမကြာမီသဘောပေါက်နှင့်အတူဒါကြောင့်အများကြီးများအတွက်ဝယ်လိုအားဤအမျိုးအစားစီမံကိန္း၊ကဖြစ်လာမှအချိန်ပြည့်အရာကကျွန်တော်မြှုပ်နှံဖို့ငါ့အသက်ကို။, ငါဖန်ဆင်းအဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်တွင်အစောပိုင်း ၂၀၁၈ မှကျူးလွန်ဖို့အပြည့်အဝသီညမ်းဂိမ်းနှင့်ကောင်းစွာ–အဆိုပါစို့သောအမှုအရာသွားကြသည်တော်တော်လေးမင်းအတွက်ကောင်းစွာလျှင်အဖွဲ့ဝင်အရင်းများမှာအသွားအားဖြင့်! ဒါဟာမူမလွယ်ကူခဲ့၊သို့သော်လည်းအဆုံးရလဒ်သည်တစ်ခုခုပေါ့မယုံနိုင်လောက်၏။ ဤဖြစ်ပါသည်၊ဝေးနေဖြင့်၊အရှိဆုံးသီပုံစံအကြောင်းအရာကိုတွေ့လိမ့်မည်ဘယ်နေရာမှာမဆိုအွန်လိုင်း။ ငါစောင့်ကြည့်တိုင်းတစ်ခုတည်းအပိုင်းနှင့်ငါ့ကိုယုံကြည်အဖြစ်၊တစ်ဦးသေဆုံး-ခဲယဉ်းပရိတ်သတ်၊သငျသညျတာပေါ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာစစ်မှန်၏အနုပညာလက်ရာများ၊တိကျမှန်ကန်တည်နေရာနှင့်အသံအလုပ်သောကျနော်အသုံးချဖို့ဒီဂိမ်းအလုပ်လုပ်အတိအကျလမ်းချင်တယ်။, ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ပိုပြီးသင်ယူဖို့တက်လက်မှတ်ထိုးရှေ့၌–ဖတ်ရှုပါ။ ပေးမယ်အပြည့်အဝဇာတ်လမ်းအပေါ်အရာကိုသစ်ပင်ညမ်းဂိမ်းအကြောင်းနဲ့သွားမယ့်အဘယ်မှာရှိ–ဒါကြောင့်ထိကပေါက်တက်ရကုန်အံ့!
ကျွန်တော်ထင်ဟုမပါဘဲဒါဟာဝင်လျှင်သင်အစီအစဉ်ကိုတက်လက်မှတ်ထိုးရန်အဝက်ဘ်ဆိုက်မှမြှုပ်နှံညမ်းနှင့်အတူတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူဆောင်ပုဒ်၏အချည်းနှီးသော၊သင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာသေချာချင်တယ်အနုပညာလက်ရာကောင်းကြည့်။ လူအများစုဟာမဟုတ်လာမယ့်ဒီမှာသူတို့ချစ်သောကြောင့်၊အယူဝါဒမူရင်းပြသခြင်းနှင့်ခံစားသင့်ကြောင်းဥပဒေအပေါ်မှာလိင်။ အဘယ်သူမျှမ၊အနုပညာတိကျမှန်ကန်မှုကိုဒီဂိမ်း၏နာမတော်နှင့်ငါပြုသောအမှုဖွင့်၊ငါ့အကြွင်းမဲ့အကောင်းဆုံးအတုအနုပညာလက်စတိုင်သောအချည်းသုံးပတ်ပတ်လည်အနှစ် ၂၀၁၂–ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြိုက်ဆုံးဗေဒနှင့်တဆိုတာသူမ်ားေတြသွားဖို့ငါနှင့်အတူသဘောတူ။, သုံးစွဲမယ့်တစ်ဦးတုန်လှုပ်စေသောငွေပမာဏအချိန်သေချာသောအများသည်ငါအသုံးချအရခန္ဓာကိုယ်အသွင်သဏ္ဌာန်၊အမြင့်၊အသားအရေ၊ဆံပင်အရောင်နဲ့တော့အပေါ်မှန်ကန်သော။ ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းတန်မ-ရှုပ်ထွေးသောဇာတ်ကောင်ဒီဇိုင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌၊ထိုက္ပါသူတို့ကိုအောင်သူတို့သည်အလွန်သူတို့လုပ်ပုံကိုထိုအရာသည်တော်တော်ယူခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန်–အထူးသဖြင့်အခါသင်ထည့်ချင်သောအလှည့်ဖျားအရာကိုရဲ့ဖြစ်ပျက်! ကၽြန္ေတာ္အနည်းငယ်နမူနာကိုအပိုင်းပိုင်းအတွက်ကဒီမှာလှည့်လည်ရန်အဘို့စိတ်ကူးတစ်ခုရနိုင်ဘယ်အရာ၏ရရှိနိုင်မယ့်အတွင်း၊ဒါပေမယ့်နှင့်အတူအဘယ်သို့ငါသင်ပြောပြဖို့အကြောင်းနောက်တစ်ခု၊ကျွန်တော်ထင်ရုံလာနှင့်အပေးအဖှဲ့အကောင်းဆုံးအဆင့်ရှေ့ဆက်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေအများကြီးထွက်ရှိပါတယ်မဟုတ်လွန်းစိတ်အားထက်သန်ကိုဒေါင်းလုတ်အကြောင်းကိုညမ်းဂိမ်းများရန်လိုအပ်ခြင်း(အများကြီးအကြောင်းပြချက်များအဘယ်ကြောင့်ဤနေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်၊ထိုလမ်းအားဖြင့်!)၊ငါဖန်ဆင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတော်လေးစောစောအပေါ်ကြောင်းသေချာစေရန်ငါ၏စီမံကိန်းဖြစ်မည်ဟုအခမဲ့ကစားရန်။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်တက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်နှင့်ဖြည့်စွက်အဖြစ်အနယ်အဖြစ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာသင်လိုချင်တဲ့အတိုင်းပေးဆောင်စရာမလိုဘဲတစ်ပြား။ ဒါကြောင့်ထင်ရစေခြင်းငှါအစွန်းရောက်အယူမှဒီအဆင့်သော်လည်း၊ရလဒ်များကိုမိမိတို့အဘို့စကားပြောဆို။, ငါလုံးဝအားလွဴဒါန္းနှင့် microtransactions–ကြၽန္ေတာ္ေပုဂ္ဂိုလ်ရေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်-သင်ဖို့သူလူတိုင်းရဲ့လှူဒါန်းဖို့ကျွန်မကိုနှစ်ကျော်ကတည်းကသင်လူအစောင့်ရှောက်ဤစီမံကိန်းအသက်ရှင်ပါ! ငါသည်အဘယ်သူမျှမအစီအစဉ်၏အောင်သစ်ပင်ညမ်းဂိမ်းတစ်ခုကုန်ပစ္စည်းပေးဆောင်၊ဒါပေမယ့်ငါသည်သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်မိတ်ဆက်စနစ်များနှင့်ကိရိယာကြောင်းအထောက်အကူပေးပါလိမ့်မည်ငါ့ကိုအတွက်ငွေကြေး။ ကျွန်တော်လည်းသေချာသောလုပ်ငန်းစဉ်၏တက်လက်မှတ်ထိုးအဆင်ပြေ–သင်ရှိသည်သုံးဖြုန်းဖို့အချိန်အများကြီးအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးပါ။, ဒီအခြေခံအားဖြင့်ခွင့်ပြုရန်မည်သူမဆိုများအတွက်လာနှင့်အရယူတစ်မိနစ်ထက်လျော့နည်းအတွက်သ:မျှော်လင့်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်၊သူတို့ချင်ပါလိမ့်မယ်ပတ်ပတ်လည်ကပ်!
ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတွဲတစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွက်သောငှါအသံထုတ်လုပ်ရေးနည်းပညာတစ်ခုသောသာအမှန်တကယ်တည်ရှိတွက်၎င်း၏လက်ရှိစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်အနည်းငယ်အဘို့အနှစ်အ။ အဘယ်သို့ဒီလိုလုပ်ပါအစာကျွေးခြင်းနှင့်စကားပြောအတွက်အမျိုးမျိုးသောသတင်းရပ်ကွက်ထံမှဖန်တီးပေးပြီးတော့ငါ့ကိုယ်ပိုင်စကားနဲ့အသောငှါ။ ကတည်းကအကြီးအကျွန်းစုအသံ(နာရီရာပေါင်းများစွာ၏အရည်အသွေးမြင့်မားသောအသံသရုပ်ဆောင်!)၊မခက်ခဲလွန်းဖန်တီးရန်×-နှုန်းဘာသာစကားအားလုံး၏ဇာတ်ကောင်၌အကြှနျုပျဂိမ်း! ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါ၊သင်တို့အဘို့အအတိအကျ?, ကောင်းစွာ၊င့်လျှင်သင်သည်အစဉ်အသိချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တူ Marge မှညစ်ပတ်ပြောဆိုခြင်းနှင့်ညည်း၊ခင်ဗျားသွားကြားအများကြီးတစ်ငရဲ၏အတွင်းပိုင်း။ အတူတူသွားအတွက်မိုး၊မူ Skinner၊Hoover နှင့်ဒေါ်ဝူ! ကျွန်မစိတ်ထင်ဒါဟာအကောင်းဆုံးဒြပ်စင်၏သီညမ်းဂိမ်းအလျောက်:သံဂိမ်းအတွက်ဒါတို့အရေးပါတဲ့အသောငှါနည္းပညာလည်းမရှိ၊နိုင်ရယ်ငါရာကိုပေးခဲ့တဲ့အတွက်စုစုပေါင်းအိပ်မက်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်က!
ကျွန်မရှိသည် ၂ ချဲ့ထွင်ဘို့စီစဉ်သီညမ်းဂိမ်းအကြောင်းသင်ကြိုးစားလိုအံ့သောငှါကျော်ကိုလာမယ့် ၁၂ လအတွင်း:အသီးအသီးပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်ဆောင်ခဲ့အတွက်စာလုံးအသစ်တွေကို၊ရှာဖှေ၊စတင်ကာတိုင်းဒေသကြီးနှင့်အားလုံးအသစ်လိင်ဖစ္ၿ renderer လိမ့်မည်ဟုခၚ၏ထိန်းချုပ်မှုခွင့်ပြုရှိသည်ဖို့အဆုံးစွန်သောငယ္ေကျော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအကြားအဇာတ်ကောင်။ ငါသည်လည်းအလုပ်လုပ်နှင့်အတူ ၃D ယိုးဒကျွမ်းကျင်သူထုတ်လုပ်ရန် ၁၀၀ သို့မဟုတ်ထို့ကြောင့်သီးသန့်ဗီဒီယိုကလစ်အပေါ်နှစ်စဉ်အခြေခံ။ ဤရွေ့ကြာရှည်လိမ့်မည်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကနေ ၃၀ သို့ ၆၀ စက္ကန့်အမည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ဖို့ခွင့်ပြုခံစားသီစတိုင်မရှိဘဲအကြောင်းအရာရှိခြင်းနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့။, ဒီမှာပဲနေပါသေးသည်လအနည်းငယ်အကွာ၊ဒါပေမဲ့သူတို့လာမယ့်စဖွင့်၊ဒါကြောင့်ဖွင့်သွားဖို့လုံးဝအရူး။ မေ့:သင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေတွေကိုရဖို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုအင်တာနက်ပေါ်မှာ၊ငါတင့်ကော်မရှင်အလုပ်။ ဒီနည်းလမ်းကကောင်းတစ်ဦးရဲ့စိတ်ကူးတက်လက်မှတ်ထိုးရန်အခုအချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်ဖြန့်ချိ!
ဒါကြောင့်၊သင်သည်အဘယ်သို့ထင်ကြဘူးဒါကြောင့်ဝေးအကြောင်းကိုငါ၏စီမံကိန်း? လျှင်အသံကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုအတွက်စိတ်ဝင်စား:ယခုအဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးရန်အခမဲ့သီညမ်းဂိမ်းဤလက်ငင်းနှင့်အမြင်ဘယ်လောက်ယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ငါ့ XXX ဂိမ်းသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရပ်တန့်မှုအတွက်အားဖြင့်မင်္ဂလာ XXX!